Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt amalitela usoro oge oyi ọhụrụ: Ụgbọ elu na-aga ebe 244 na mba 92
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt amalitela usoro oge oyi ọhụrụ: Ụgbọ elu na-aga ebe 244 na mba 92
Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • News • Ndi akuko • Transportation • Akwụkwọ akụkọ USA
Anzeigetafel *** Akụkọ mpaghara ***
Usoro oyi ọhụrụ na-abata n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt (FRA) na Ọktọba 31. Usoro iheomume na-egosi ngụkọta nke ụgbọ elu 83 na-agba ụgbọ elu ndị njem gaa ebe 244 na mba 92 n'ụwa nile.
Ụgbọ elu ọhụrụ na-aga US dị site na FRA
Frankfurt Usoro oge oyi nwere ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu buru ibu na Caribbean na Central America
Ọtụtụ ebe ndị Europe na-aga n'usoro oge ọkọchị na FRAPORT
Site na iji nwayọọ nwayọọ na-ebuli mmachi njem metụtara ọrịa na-efe efe, enwere ike ịgbakwunye ebe njem na ụgbọ elu na obere oge na nhazi oge. Tụnyere ọdụ ụgbọ elu ndị ọzọ na Germany, FRA ga-ewetakwa njikọ kachasị ukwuu n'oge oyi a. Nke a na-emesi ike ọrụ Frankfurt dị ka ọdụ ụgbọ elu mba ụwa kachasị na nke kacha mkpa. Usoro oge oyi ọhụrụ ga-adịgide ruo Maachị 26, 2022.
A na-eme atụmatụ ụgbọ elu 2,970 kwa izu (ọpụpụ), na nkezi, maka mmalite oge oyi na Nọvemba. Nke ahụ bụ pasenti 30 na-erughị oge 2019/2020 nhata (ọrịa butere ọrịa), mana pasentị 180 karịa n'oge oyi nke 2020/21. Ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu akwadoro gụnyere ọrụ ụlọ 380 (intra-Germany), ụgbọ elu intercontinental 620, yana njikọ Europe 1,970. Ngụkọta ụfọdụ oche 520,000 dị kwa izu - ihe dịka pasenti 36 n'okpuru ọnụ ọgụgụ maka 2019/2020.
Ọtụtụ ụgbọ elu na-aga US dị na FRA
Ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu na US ebiliwo nke ukwuu, nke nkwupụta US na-akwalite ya imepe obodo site na Nọvemba 8 nye ndị ọbịa si mba ọzọ - ma ọ bụrụhaala na agbanyere ha ọgwụ mgbochi zuru oke ma nye nnwale Covid-19 na-adịghị mma tupu ha apụ.
Enwere njikọ oge niile site na FRA ruo ebe US 17 na oge oyi na-abịa. Lufthansa (LH), United Airlines (UA), na Singapore ụgbọ elu (SQ) ga-aga New York City kwa ụbọchị. Na mgbakwunye, onye na-ebu ihe ntụrụndụ German Condor (DE) ga-arụ ụgbọ elu ise kwa izu na Big Apple site na Nọvemba
1. N'ihi ya, a ga-enwe ngụkọta nke elu ụgbọ elu ise kwa ụbọchị si FRA ka John F. Kennedy (JFK) ma ọ bụ Newark (EWR). Ụgbọ elu Delta (DL) ga na-efega kwa ụbọchị na New York-JFK site na etiti Disemba. Ọzọkwa, United Airlines na Lufthansa ga-enye ụgbọ elu 20 kwa izu na Chicago (ORD) na Washington DC (IAD).
Lufthansa na United ga-efe efe kwa ụbọchị na San Francisco (SFO) na Houston (IAH), yana Denver ugboro iri na abụọ kwa izu. Lufthansa na Delta ga-agba ụgbọ elu na Atlanta (ATL) ugboro iri n'izu.
Ebe ndị US ndị ọzọ gụnyere Dallas (DFW) na Seattle (SEA) (nke Lufthansa na Condor na-eje ozi), na Boston (BOS), Los Angeles (LAX) na Miami (MIA) (nke Lufthansa na-eje ozi). Ọzọkwa, Lufthansa ga-enye Orlando (MCO) ọrụ ugboro isii kwa izu na ọrụ ugboro ise kwa izu na Detroit (DTW), ma na-efega Philadelphia (PHL) ugboro atọ n'izu. Malite n'etiti ọnwa Disemba, ndị na-ebu German Eurowings Discover (4Y) ga-arụ ụgbọ elu na Tampa (TPA) ugboro anọ n'izu.
Ebe ezumike oyi na-adọrọ mmasị
Usoro iheomume ọhụrụ FRA na-egosipụta ọtụtụ ebe dị iche iche na Central America na Caribbean. Dịka ọmụmaatụ, Condor, Lufthansa, na Eurowings Discover ga-enye ọrụ na ebe ezumike mara mma na Mexico, Jamaica, Barbados, Costa Rica na Dominican Republic. Nke a gụnyere ụgbọ elu ugboro ugboro na Punta Cana (PUJ; ugboro 16 n'izu) na Cancún (CUN; ruo abụọ kwa ụbọchị).
Ọtụtụ ụgbọ elu na-aga n'ihu na-enye ụgbọ elu si Frankfurt na-aga ebe na Middle na Far East. Dabere na mmepe nke mmachi njem Covid-19 nke ụfọdụ mba Eshia nyere iwu, ọnụọgụ njikọ na Far East nwere ike ịbawanye n'ihu. Ọnọdụ ahụ ka na-agbanwe agbanwe: Thailand, dịka ọmụmaatụ, na-ezube imeghe ókèala ya na Nọvemba. Ụgbọ elu na-aga Singapore (SIN) nke Lufthansa na Singapore ụgbọ elu na-arụ n'ime oke ụzọ njem maka ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi ga-adịkwa n'oge oyi.
Ọtụtụ ụgbọ elu amaliteghachila ọrụ na njem Europe site na FRA n'oge okpomọkụ a. A ga-aga n'ihu ugbu a n'oge oyi. Ọ ga-ekwe omume isi na FRA fega na isi obodo Europe niile ọtụtụ oge n'ụbọchị. Usoro oge oyi gụnyekwara ọtụtụ ebe ndị njem nlegharị anya na Europe, gụnyere Balearic Islands, Canaries, Greece, Portugal na Turkey.
Enwere ike ịhụ ozi emelitere na ụgbọ elu dị na www.frankfurt-airport.com